Igumbi lesiHlomelo 207 Castle Chalet
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguOscar Yovani
Wamkelekile kwi-Chalet Castillo, eyona ndawo inomtsalane edibanisa ubuhle obukhulu beLake Izabal, indawo yokuzalwa ye-manatee, kunye nemfihlo, ukhuseleko, intuthuzelo kunye nobuhle bezibonelelo zayo; iyenza ibe yeyona ndlela ilungileyo yokuphumla ngokusingqongileyo kunye nemeko yangoku, imizuzu nje engama-30 ukusuka eRío Dulce naseCastillo de San Felipe eIzabal.
Simi kunxweme lweChibi elikhulu i-Izabal; nge-marina yabucala njengesampulu yobuhle bechibi kunye nokusingqongileyo kwendalo esingqongileyo, ubumfihlo buphelele kunye nokhuseleko kunye negadi yabucala yokupaka. I-suite ye-chalet yethu ineJacuzzi kunye nebalcony ejonge echibini. I-Wifi yasimahla kuzo zonke iindawo zethu.
Nuestros inquilinos también pueden disfrutar de nuestro Deck con hamacas, área de estar, piscina y hermosas vistas al lago de Izabal...
Simi kunxweme lweChibi el…
4.75 (iingxelo zokuhlola 4)
Sibekwe kwindawo yase-El Estor Izabal, kufutshane kakhulu nedokhi yabalobi ukonwabela imisebenzi yemihla ngemihla abayiphuhlisayo kwaye ikufutshane kakhulu kwindawo yosapho ukuze bakwazi ukugcina igrosari kunye nezinye ...
Umbuki zindwendwe ngu- Oscar Yovani
Sinabadibanisi abahamba iiyure ezingama-24 kumaziko ethu !!!